musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Kudada kweMontenegro Misha miviri Yakanakisa Yekushanyirwa Kwenyika
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Montenegro Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Trending Now • Wtn
Alexandra Sasha (kurudyi) akamiririra Montenegro kuUNWTO Gen Assembly.
MuMontenegro, The Hon. Jakov Milatovic igurukota rinozvikudza reEconomics, Alexandra Sasha mutungamiriri mukuru anodada, uye Executive Board Member kuWorld Tourism Network (WTN) - uye Montenegro inyika inodada. Misha miviri yekumaruwa, uye kuzivikanwa neUNWTO ndicho chikonzero.
The World Tourism Network akanga akoka Montenegro kuti ive chikamu chechirongwa chitsva chinozivikanwa seBest Cultural Cities or Regions of the World.
Mukuru wezvekushanya kweMontenegro, Aleksandra Sasha, anga achitungamira Balkan Chitsauko chesangano kweinopfuura gore, akange aratidza kugona kwemaguta madiki, kunyanya maguta madiki etsika mune dzimwe nguva isingatarisirwe mukana wekushanya kwepasirese.
Amai Sasha vakamirirawo Montenegro pamusangano mukuru uchangopera weUNWTO, World Tourism Organisation.
Sangano reWorld Tourism Organisation (UNWTO) muchirongwa chitsva ranga richionawo kukosha kwekushanya kumaruwa uye. yakatanga "Yakanakisa Tourism Village chirongwa".
Izvi zvakasumwa zviri pamutemo kumusangano mukuru weUNWTO svondo rapfuura.
Hon. Jakov Milatovic, Gurukota reEconomics, Montenegro
Zvinocherechedzwa ibasa rekushanya mukuchengetedza misha yekumaruwa, pamwe nenzvimbo dzayo, kusiyana kwechisikigo netsika, uye tsika nemagariro avo, kusanganisira gastronomy yemuno.
Misha miviri muMontenegro yakaremekedzwa mukati meiyo Yakanakisa Tourism Village chirongwa neUNWTO: Godinje naGornja Lastva muTivat.
Punyanzvi hweichi chirongwa i“Purogiramu Yokuvandudza” iyo misha ye20 kubva kupota nyika yakasarudzwa, uye Montenegro ndiyo nyika bedzi umo misha yakawanda semiviri yakabatanidzwa.
Misha yakaongororwa nebhodhi rezano rakazvimirira richibva pane zvakarongwa: tsika nemagariro uye zviwanikwa; kusimudzirwa nekuchengetedzwa kwezviwanikwa zvetsika; kugadzikana kwehupfumi; kugarika kwevanhu; kuchengetedza kwezvakatipoteredza; kushanya kunokwanisa nekusimudzira uye kukosha kweketani kubatanidzwa; utongi uye kukoshesa kwekushanya; zvivakwa uye kubatana; uye hutano, kuchengeteka, uye kuchengeteka.
Yakanakisa Tourism Village chirongwa neUNWTO
Misha yose 44 yakawana hwerengedzo yezvibodzwa 80 kana kupfuura kubva pazvingabvira 100. Chirongwa ichi chinosanganisira mbiru nhatu.
Misha yose ye174 yakarongwa ne75 UNWTO Nhengo dzeNyika. Imwe neimwe Nhengo yeNyika inogona kupa inokwana misha mitatu ye2021 pilot chirongwa. Pakati peizvi, makumi mana nemana akazivikanwa seMashasha Ekushanya Akanakisisa neUNWTO. Mimwe misha makumi maviri ichapinda muUpgrade Program yechirongwa ichi. Misha yese makumi matanhatu neina inopinda kuita chikamu cheUNWTO Best Tourism Villages Network. Iyo inotevera edition ichavhurwa muna Kukadzi 44.
Tsamba yakanyorwa neMunyori Mukuru weUNWTO, Zurab Pololikashvili kuGurukota rezvekusimudzirwa kwehupfumi muMontenegro, Jakov Milatovic. Godinje naGornja Lastva yaizowana rutsigiro kubva kuUN-yakabatana agency kuMontenegro inogona kuvandudza basa rekushanya mumisha iyi, saka yaizochengetedza nzvimbo dzekumaruwa. Tsamba iyi yakasimbisa kuti kushanyirwa kwenyika kunofanira kuita kuti budiriro ienderere mberi, kuitira kuti vakoshese misha nekuchengetedza upfumi hwavo hwetsika nemagariro, pamwe nehunhu hwechokwadi.
MuMontenegro Tourism chikamu chepodfolio neGurukota reEconomic Development yenyika.
Gurukota rinodadisa, Hon. Jakov Milatović anobvumirana neiyi yakasarudzika mukana nyika yake diki mudunhu reBalkan ine kana zvasvika kumisha midiki yekushanya uye matunhu akakosha mutsika.
Mutungamiri Milatović anozivikanwa muHurumende itsva yeMontenegro semutungamiri anogona kutungamira nyika munzira yekudzoreredza hupfumi nekushanya. Anoshandisa mazano echizvino-zvino mukugadzirisazve uye anotsigirwa zvakanaka nenyika dzepasi rose.
Jakov Milatović akaberekwa muna 1986, muPodgorica, Montenegro, kwaakapedza chikoro chepuraimari nesekondari.
Akapedza zvidzidzo zvake zvepasikiriyasi mumunda weEconomics paFaculty of Economics, University of Montenegro, aine avhareji yegiredhi 10 uye aive mudzidzi wechizvarwa.
Akaremekedzwa nemibairo yakawanda yemumba kubva kubazi reDzidzo, University of Montenegro, Ministry of Foreign Affairs, Atlas Group etc., pamwe nekushamwaridzana kune dzimwe nyika. Akapedza gore rezvidzidzo paI Illinois State University seMushandi weHurumende yeUS; semester imwe paYunivhesiti yeEconomics uye Bhizinesi muVienna (WU Wien) seAustria Government Fellow; gore rimwe redzidzo paYunivhesiti yeRome (La Sapienza) seEuropean Commission Fellow.
Akapedza dhigirii rake ra master in economics paUniversity yeOxford. Aive Hurumende yeBritain (Chevening) Shamwari.
Akatanga ruzivo rwake rwebasa paNLB Bank, Podgorica muboka rekuchengetedza njodzi reBhangi, tevere kuDeutsche Bank, Frankfurt muchikwata chekuongorora njodzi yechikwereti cheBhangi ichitarisa kuCentral neEastern Europe nyika.
Kubva 2014, anga achishandira European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) muchikwata chekuongorora hupfumi uye zvematongerwo enyika, kutanga semuongorori wezvehupfumi mudunhu reSoutheast Europe, uyezve semuongorori wezvehupfumi kuWestern Balkan nyika kubva ku. hofisi muPodgorica. Muna 2018, akakwidziridzwa kuve mukuru wezvehupfumi hwenyika dzeEU, kusanganisira Romania, Bulgaria, Croatia neSlovenia kubva kuhofisi kuBucharest.
Akawana zvimwe zviitiko kuburikidza nehurongwa hweUnited Nations muNew York; kupinda zvikoro uye kudzidziswa kweGerman Konrad Adenauer Foundation muPodgorica; Embassy yeMontenegro muRome; Hofisi yeKubatana Kwepasi Pose yeFaculty of Economics muPodgorica; Oxbridge Academic Zvirongwa muOxford; International Monetary Fund muLondon; London School of Economics (LSE) uye University of Beijing; iyo Leadership Academy yeStanford University uye University of Belgrade nevamwe.
Ndibaba vevana vaviri. Anonyatso Chirungu, anotaura chiItalian neSpanish.
Zvita 8, 2021 pa09: 47
Ndakatora maviri kana matatu ekodak kwaari, uye akaratidza kusabvumirana kukuru kune ... Aiva mutambi ane utsinye zvakanyanya, aisafarira basa rake zvakadaro. Ndinoziva, mataundi eMontenegrin akapfuma mukuvaka, kubva panguva dzakasiyana-siyana dzinotora maitiro epasirese, Montenegro iri kusimudzira mitambo yakanyanyisa iyo vashanyi .